စစ်အစိုးရ၊ လက်ရှိအစိုးရနှင့် NLD လွှတ်တော်တက်ရေး | ဧရာဝတီ
အောင်လင်းထွဋ်| April 26, 2012 | Hits:2,512
| | စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့အနေဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်တိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ် ထုတ်လေ့ရှိသည်ကို အထူးအထွေ မတင်ပြလိုတော့ပါ။ သို့သော် အတိတ်ကသမိုင်းကြောင်းများကို ဆင်ခြင်ပြီး NLD ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် စာရေးသူ သိရှိခဲ့သမျှ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် (ဓါတ်ပုံ - photayokeking.org)
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Insider information* April 26, 2012 - 7:31 pm	Insider information is right!
Than Shwe stll controls his pawns.
Be wise , don’t forget to get from othter help/power and don’t waste time for people. Everybody is getting old ; time is not stopping.
Military junta is never worthy to trust….even though they swear in front of Buddha..
Reply	koko April 26, 2012 - 8:22 pm	Trator Banyunt
Reply	့happyboykglay April 26, 2012 - 8:32 pm	မရိုးသားမှု…(နှင့်)မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်..ဟုတ် အလွန်အရေးကြီးသောကာလပါတကား။ဖွဲ့စည်းပုံ
Reply	AunG April 26, 2012 - 8:56 pm	He is the real lier.
Reply	joe April 26, 2012 - 9:12 pm	ကိုအောင်လင်းထွဋ်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမှန်းချေ အရဆိုရင်တော့ မှန်သလောက်ရှိတာပေါ့ ….
Reply	moe April 26, 2012 - 9:35 pm	This is true ! The gov is not honest. See what
really happen in the country. The people and
ethnic groups in the country are still poor and
bully by the gov and military.
Reply	san nay yar April 26, 2012 - 9:55 pm	Not only international countries forget Burmese Military government’s criminal actions on people, but also some media forget them. And then, some media praises Burmese government. Shame one them.
Reply	san nay yar April 26, 2012 - 10:00 pm	Not only international countries forget Burmese Military government’s criminal actions on people, but also some media forget them. And then, some media praise Burmese government. Shame on them.
Reply	san nay yar April 26, 2012 - 10:12 pm	Not only international countries forget Burmese Military government’s criminal actions, but also some media forget them.
And then, some media even praise Burmese government. Shame on them.
Reply	ပေတိုး April 26, 2012 - 10:18 pm	ဦးအောင်လင်းထွဋ်ပြောသည်မှာ လက်ခံသင့်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်စစ်သားသည်ယခင်ပြည်သူချစ်သော် လဲယခုချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေသည်ကိုသိသင့်ပါသည် အနောက်နိုင်ငံများမှလျော့ပေါ့ပေးလာသည်နှင့်အမျှစကားလုံးများမာကျောလာသည်ကိုသတိထားသင့်ပါသည် ပရိယာယ်များသောလူထွက်ကြီးများသည် ကိုယ်ကျိုးမကျန်းရင် ဘာမျှမလုပ်ပါ ယုံချင်စရာဘာမျှမရှိပါ သူ့တို့ဖခင် သန်းရွှေကိုအကာအကွယ်ပေးနေရသည် ဥပဒေကလဲကမောက်ကမ လူတွေကလဲကမောက်ကမနဲ့မယုံတာအကောင်းဆုံးပါ ခုဒါလေးပြင်ဖို့တောင်ဒီလောက်ခက်နေရင် ရှေ့ဘယ်လိုဆက်ကျမှာလဲ ကိုယ်ပြင်သင့်တယ်ထင်တာကိုပြင်မပေးရင်လွတ်တော်ကို
Reply	ကိုပြုံးငို April 26, 2012 - 10:34 pm	ဗိုလ်မှုဟောင်း အောင်လင်းထွဌ်ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်
အမေရိန်မှာ နေပြီးတဖက်တလမ်းကနေ မြန်မာ
နိုင်ငံကို မချော်လှဲအောင် ကုတ်ကလေဆွဲပေးနေ
Reply	angle maung April 27, 2012 - 1:40 am	thank you for your journal.absolutely right your subject.we hope batter in future for our country.
Reply	Senior General Than Shwe: April 27, 2012 - 4:37 am	Dont talk too much about me!
Reply	NAI KYAW SEIN April 27, 2012 - 7:54 am	စစ်အစိုးရနဲ.အာဏာရှင်လက်သစ် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို.တဖြည်းဖြည်းမရိုးသားဘူးဆိုတာ ပြသနေပါပြီ ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်များဟာ ပြည်သူတင်မြှောက်သော ပါတီမဟုတ်လို.ပြည်သူတွေ၇ဲ.လိုအပ်ချက် ပြည်သူတွေဖြစ်ချင်တာကို မလိုက်လျောနိုင်ဘဲ နိုင်ငံတကာမှာအရှက်မရှိဗြောင်လိမ်နေတယ် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်လဲဘဲ သူ၏လက်ကိုင်တုတ် သူ.စိတ်ကြိုက် သူ.အာဏာတည်မြဲေ၇းအတွက်စစ်ဗိုလ်များကို အသုံးချနေရုံမက သမတအာဏာဖီဆန် တချို.တိုင်းရင်းသားတွေ ငြိမ်းချမ်းတယောင်ပြပြီးတိုင်းရင်းသားများကိုစစ်ခင်းနေတယ် ပြည်သူများနဲ.တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးပြီး ဒီမိုကရေစိအတွက်၇ယူပါ။
Reply	saokhunwan April 27, 2012 - 7:55 am	I agree with him, he is the one who had already played in this Burmese Drama or Tragedy play. If we people rely on this junta that will take another decades to reach our goal.Let us think of the days students, Sanghas, writers and even artists suffered. Once golden Land lost his image & turn asapoorest one as Zimbabwe. It’sapity although the country is listed asapoverty land you can find the ruling members as millionaires and bankers and still in the Hluttaw to exploit further immunity.
Reply	ပါကြီးဖိုး April 27, 2012 - 8:45 am	မရိုးသားတာ ညစ်ပတ်တာတွေက အာဏာရှင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေပါ။
လူဖြစ်လျှက် တိရစ္ဆာန်စိတ်ပေါက်နေသူတွေဟာ သေပြီးနောက်
လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိခိုက် တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအပေါ် စစ်မှန်တဲ့စိတ်ရင်းစေတနာနဲ့
ဆောင်ရွက်ပေးသူတွေအဖို့ ပြည်တွင်းသာမက နိုင်ငံတကာမှ
စေတနာရဲ့အကျိုးဟာ အချိန်မဆိုင်းပဲ အကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောပါ
ဘယ်အလုပ်မဆို ရိုးသားမှုရှိမရှိ စေတနာမှန်မမှန်ဆိုတာကို လူ့နှလုံးသားက အလိုလို ခံစားနားလည်နိုင်ပါတယ်။
Reply	Saw April 27, 2012 - 2:05 pm	Ko Aung Lin Htut,
Good article, fair enough opinion to both sides. By the way, do you or your colleague has any joker?
Reply	Beh April 27, 2012 - 5:25 pm	Very good article and very true information that is leading the current situation in Burma/Myanmar these days. All the information is provided in this article seems to link to each other quite well and logical.
Reply	Hein Zaw April 27, 2012 - 6:55 pm	Most of what Aung Lin Htut said was right . But he always try to protect his old boss Khin Nyunt . Ae all of us never forget Khin Nyunt was the real culprit in prolonging the military dictatorship . He was the very cunning henchman of Ne Win and Than Shwe . He was the man who tortured , jailed and and destroyed tens of thousands of families . If given the chance he will definitely do the same things again .Whatacunning man Khin Nyunt was and still is . Burmese people will never forget and neve
Reply	u shein April 27, 2012 - 8:14 pm	တိုင်းပြည်ကိုချစ်သောစစ်သားကောင်းပါပေပဲဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွတ်။
Reply	Htan Kyint Pon April 27, 2012 - 9:19 pm	စစ်ဖက်က အာဏာရူးတွေ လုပ်လိုက်တာ တစ်နိုင်ငံလုံးအကျင့်တွေပျက်ကုန်ပြီ … တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ဓါတ်တွေခိုင်မာလာပါပြီ … တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းစိတ်ကုန်နေပုံရပါတယ်…. ဒီအတိုင်းကြာလာရင် တိုင်းပြည်ပြိုကွဲပြီး တရုတ်လက်ကို ကချင်ပြည်နယ်ပါသွားမှာ ကို စိုးရိမ်မိပါတယ်
Reply	မိုးကေ April 29, 2012 - 12:53 pm	ဦအောင်လင်းထွဋ်တို. ဒီအက်အေဆင်းတွေ အသုံးမကျလို. သန်းရွေလက်ထဲ တိုင်းပြည်ရောက်၇တယ်။
Reply	မေနိုင်း April 29, 2012 - 9:32 pm	ဦးအောင်လင်းထွဋ်ရေေ ကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကောင်တွေက ဘယ်တုံးကမှရိုးသားမှုမရှိဘူး။ အမြဲကလိမ်ကျနေကြပဲ။ အခုလည်းရှေ့မှာပြင်ထားပြီ့းသား စကားလုံးကိုအခုပြင်လိုက်လဲ ဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ကိုက မရိုးသားတာသေချာတာ။ အဲ့ဒါနဲ့များအရှက်မရြှိ ပည်သူတွေအကျိုးစီးပွားေ ရှးရှုတယ်ပြောနေသေးတယ်။ရွံစရာကောင်းတယ်။
Reply	sai than tun April 30, 2012 - 1:18 pm	i think that is true
Reply	မင်းဂွတ့် May 1, 2012 - 5:18 pm	လာဘ်လာဘကေါင်းတဲ့ အမေစုကို ပြည်သူတွေ
ထောက်ခံမဲပေးရ ကျိုးနပ်ပြီ ခွပ်ဒေါင်း ပေါက်ခံရ
သည့် ပါတီက ဖျက်လိုဖျက်ဆီးအကြံကို ကြိုတင်
သတိထားပါ အရပ်၈မျက်နှာမှ လာသောငွေကြေး
ကို ကြည့်ပြီး လွတ်တော်အမတ်တွေ စိတ်ယားနေပြီ
Reply	shanmintar May 5, 2012 - 11:18 pm	Nld and peoples should be low profile in this few years ,should not be too much emotion to attack the military , thein Sein ,min Aung hlain are partner ,Daw Su and all of citizens have to wait the time of army power became weak ,it needafew decade not2,3 years .See our neighbors , if we was too rush and rough ,we will loss the tiny progress what we got now ,peoples power can not beat gun,s power,
Reply	minmg May 7, 2012 - 12:53 pm	တပ်ထဲမှာနေလာတုန်းကတော့ဘာမှမပြောဘဲ..ခုမှ.သူတို့တွေမကောင်းပေမဲ့.သူတို့လဲပြောင်းချင်စိတ်လည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တာဘဲ..ကိုအောင်လင်းထွတ်၇ယ်သဲနဲ့ပက်သလိုဖြစ်နေပြီ..